Round - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on August 6, 2014 at 10:21 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Round ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဝါကျတစ်ကြောင်းမှာ ထည့်သုံးလိုက်တဲ့အခါ part of speech တစ်ခုဖြစ်သွားတတ်သော စကားလုံးတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ parts of speech ရှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ noun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, pronoun နှင့် interjection တို့အနက် ၅မျိုးလောက်ကို round က အစားထိုးတာဝန်ယူနိုင်တယ်။
၁။ Round ကို noun အဖြစ်သုံးခြင်း
ကျွန်တော်တို့ ဂေါက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ၊ လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲတွေကို "a round of golf" "a round of boxing" လို့ ပြောဆိုပါတယ်။ ပြန်ကြော့ကြော့ပြီး ဆိုရတဲ့ တေးသီချင်း ဥပမာ "row, row, row your boat..." နှင့် "Frere Jacques" တွေကို musical rounds လို့ ဆိုပြန်တယ်။ Shakespeare က ဘုရင့်သရဖူကို "a golden round" လို့ တင်စားခေါ်ဆိုခဲ့တယ်။ လှေခါးထစ်တွေကိုလည်း rounds လို့ ခေါ်သဗျ။ Herodotus ကနေ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ US စာပို့လုပ်ငန်းရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကလည်း ဒီလိုဆိုတယ် "Neither snow nor rain nor heat nor gloom of night stays these couriers from the swift completion of their appointed rounds." (ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ။)
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ round ကို noun အဖြစ် သုံးနိုင်တဲ့ အသုံးများတဲ့ စကားတွဲအချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ Round ကို adjective အနေနဲ့ သုံးခြင်း
စက်ဝန်းပုံစံရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုများကို round နှင့် ပုံဖော်ပြပါတယ်။ ဥပမာ ဘောလုံး၊ ဂေါ်လီလုံး၊ လိမ္မော်သီး၊ စပျစ်သီး စသည်တို့ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် ပန်ကိတ်၊ ပန်းကန်ပြား၊ ဒိုးပြား၊ ဘီး၊ စီဒီ၊ ဒိုးနတ်၊ ပေါင်မုန့် စသည်တို့လည်း round နှင့် သရုပ်ဖော်တယ်။ vowel အသံထွက် အချို့လည်း round ပါဘဲ။ ဥပမာ နှုတ်ခမ်းကို ခပ်ဝိုင်းဝိုင်းလုပ်ပြီး အသံထွက်ရတဲ့ 'o' 'u' စသည့် အသံများပါတဲ့ စကားလုံးများပေါ့။
အရေအတွက်ကို round နဲ့ ဖော်ပြရင် ကြီးမားထင်ရှားတဲ့ အရေအတွက်ကို ဆိုလိုတယ်။ ဥပမာ "A million dollars isagood round sum." ဒါပေမဲ့ ခန့်မှန်းတဲ့ သဘောနှင့် သုံးရင်တော့ 'အနီးစပ်ဆုံး' 'အကြမ်းဖျင်း' စတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပေါက်ပါတယ်။ ဥပမာ "The figure of three thousand years was onlyaround guess."
Shakespeare နဲ့ သူ့ခေတ်ပြိုင်စာရေးဆရာများက round ကို စကားပြောပွင့်လင်းတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ တွင်တွင်သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ဥပမာ "Sir Toby, I must be round with you." မြင်းတို့သည် ပုံမှန်နှုန်း 'at good round pace' နဲ့ခပ်သော့သော့လေး ပြေးနိုင်သလို "scholars often have round shoulders" ခပ်နှိမ်နှိမ်လေး နေတတ်သူဟု သုံးကြတယ်။
၃။ Round ကို verb အနေနဲ့ သုံးခြင်း
ရွှံ့တုံးတစ်တုံးကို ဘောလုံးပုံဝိုင်းစက်အောင် လုံးလျှင် 'roundapiece of clay intoaball'၊ စားပွဲစောင်းကို အနားလုံးလျှင် 'round the edges ofatable' ၊ စုစည်းသည် 'round the bases' ၊ စုဝေးသည် 'round the chickens intoacorner' ၊ စုဆောင်းသည် 'round out your gnome collection' ၊ ပေါင်းသည် 'roundanumber' တန်ပြန်သည် 'round suddenly on someone who has been annoying you.'
၄။ Round ကို Adverb သို့မဟုတ် Preposition အနေနဲ့သုံးခြင်း
ဒီလိုသုံးတာက အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်မှာထက် ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ်မှာ ပိုတွေ့ရတယ်။
When the doctor slammed, everyone turned round. (လှည့်ကြည့်သည်)
At last, the bus came round the corner.
*turn + round (Adjective)
* round + the corner (Prepostion)
Dailywritingtips.com မှ Maeve Maddox ၏ Round ကို ကိုးကား ဘာသာပြန်ဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။